यौनधन्दामा शरणार्थी युवती |
यौनधन्दामा शरणार्थी युवती
पूर्वाञ्चलका विभिन्न शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी युवतीहरू यौनधन्दा संलग्न हुने क्रम बढेको छ । सातवटै शरणार्थी शिविरका झन्डै पाँच हजार युवती यौनव्यवसायमा सक्रिय रहेको अनुमान छ ।
कात्तिकको अन्तिम साता मोरङको शनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरका तीन युवती एकाएक बेपत्ता भएका थिए । उनीहरूको खोजीका लागि अभिभावकले तत्काल स्थानीय शिविर रेखदेख समितिलाई गुहारे । तीन दिनपछि विशेष सुराकीको आधारमा उनीहरू विराटनगर, इटहरी र दमकका होटलमा कार्यरत रहेको पाइयो ।
आफूहरू होटल तथा रेस्टुरेन्टको मागअनुसार एक-दुई हप्तामा ठाउँ सर्ने गरेको यौनव्यवसायमा संलग्न युवतीहरूको भनाइ छ । शिविरभित्रै जन्मेका र हुर्केका किशोरीहरू राजीखुसीले यौनव्यवसाय गरेको बताउँछन् ।
‘शिविरभित्रै बस्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने बाहिरकालाई के थाहा ? पेट पाल्नै पर्‍यो,’ शिविरकी एक युवतीले भनिन् । अधिकांश पक्राउ परेका युवतीहरूको यस्तै जवाफ आउने गरेको सशस्त्र प्रहरी बल शरणार्थी बेस क्याम्पका एक प्रहरीले बताए ।
अभावैअभावको जिन्दगीबाट मुक्ति पाउन आफूहरूले यो पेसा अँगालेको यौनकर्मीहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो पनि राम्रो लाउने, राम्रो खाने इच्छा चाहना र रहर छ,’ एक युवतीले भनिन्, ‘तर शिविरभित्र बसेर मात्र त्यो पुरा हुदैन ।’
झापाको बिर्तामोड, काँकरभिट्टा, दमक, भद्रपुर, सुरुंगालगायतका सहरमा उनीहरूको चहलपहल देखिने गरेको छ । जसमध्ये शरणार्थी युवतीहरूको सबैभन्दा बढी चहलपहल हुने सहर दमक हो । यसबाहेक पूर्वका धरान, इटहरी, विराटनगर, इनरुवालगायतका सहरमा पनि उनीहरू देहव्यापारका लागि जाने गरेको पाइन्छ । ‘झापा बाहिर धरानमा माग बढी छ,’ एक युवतीले भनिन् ।
शिविर रेखदेख समितिका संयोजक डिबी गुरुङ पूर्वाञ्चलमा फस्टाउँदो यौन व्यवसायसँगै शरणार्थी युवतीका माग बढिरहेेको बताउँछन् । ‘सकेसम्म शिविरका युवती बाहिर नजाउन् भनेर सतर्कता अपनाउने गरिए पनि यौनधन्दामा संलग्न हुनबाट रोक्न सकिएको छैन,’ संयोजक गुरु्रले भने ।
शरणार्थी मामिलामा काम गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोगसँग कति शरणार्थी युवती यौन पेसामा संलग्न छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । ‘शरणार्थी युवती यौन व्यवसायमा छन् भन्ने कुरा मिडियामार्फत थाहा पाएका छौँ,’ उच्चायोगका बाह्य सम्बन्ध सहायक विमलबाबु खत्रीले भने, ‘हामी शरणार्थीमा सचेतना जगाउने कार्यक्रमरू गरिरहेका छौं ।’
पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी युवतीलाई देहव्यापारमा संलग्न गराउन शिविरमा घुम्ती समूह खटिने गरेको बताइन्छ । त्यस्तो समूहले झापा र मोरङका सातवटै शिविरका युवतीलाई मोटो रकम दिएर पूर्वका होटल तथा रेस्टुरेन्टसम्म पुर्‍याउने गरेको रेखदेख समितिका संयोजक गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार समितिले नियन्त्रणमा लिएका युवतीले दिएको बयानअनुसार उनिहरूलाई यो व्यवसायमा लगाउन एउटा गिरोह नै सक्रिय छ । घुम्ती समूहले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको धरानसम्मका लागि ठूलाठूला होटल रेस्टुरेन्टमा युवती पुर्‍याएर यौन व्यवसायमा लगाउने गरेको छ । समूहमा शरणार्थी महिला नै छन् ।
अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका युवती यस्तो धन्दामा तानिएका छन् । यौन कार्य गरेबापत उनीहरूले एकपटकमा दुई सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन् । फोटो समाचार विशेष होइन।
« चुम्बनमा एक नम्बर जोमसोमले मोहनी लगायो »
david adhikari, on May 14, 2011 at 4:22 pm said:
damravitta is most silent and beautiful place.it is located in morang. koshi,nepal